1c Izikhungo: Izimali 8
Uhlelo "1c: Izimali 8" uyakwazi ukugcina noma iyiphi indaba yokubala komhlaba ibhizinisi. Ukushintsha izinqubo zezimali babe lula futhi kuwusizo kakhudlwana. 1c: Izimali 8 kuqinisekisa efanele wamaphepha ibhizinisi, kanye nokulungiselela nokuzithoba intela kanye nezitatimende zezimali ngokuhambisana nomthetho waseRussia.
Esebenzisa ukuthuthukiswa ngokushesha 1c: Accounting zihlanganisa:
1) Ukufakwa kwedatha Umsizi kule nhlangano, eklanyelwe ugcwalise ukwaziswa ngenhlangano, abaphathi kanye neminye imininingo saziso.
2) I-ONLINE LIBRARY luhambisane ukuxhumana akhawunti equkethe operation commercial. Utshela ezimali, indlela kufanele uhlelo a operation ethile.
3) E-book "Ukuthuthukiswa okusheshayo 1c: Izimali 8" - senzelwe abasebenzisi imfundamakhwela, kuvumela bakwazi ukufunda izindlela eziyisisekelo zokusebenzisa uhlelo;
4) Panel imisebenzi Wabasaqalayo ukhombise ukuthi kuphi idokhumenti itholakala khona, futhi ochwepheshe okuthwala ngempumelelo imisebenzi yansuku zonke. Izihloko ezisemqoka zihlanganisa ebhange, imali, izincwadi, njll
5) Crisis Management badalelwa inhloko wakwazi ukuthola ulwazi ngesikhathi esifanele mayelana nokuma kwezezimali kanye nemiphumela yezimali ka umsebenzi wenhlangano.
6) Ngenxa ukuqapha accountant can ngokushesha futhi ngendlela elula kakhulu ukuthola ulwazi ezilinganisweni esandleni nama-akhawunti yamanje ye-imali engakhokhwanga Iyatholakala ngosuku nokukhokhwa kwezintela nezimali imibiko yokwethula.
7) Njengoba ingxenye ikhithi enikeziwe efakwe ohlwini semininingwane demo, kakade esethula imibhalo, echaza imisebenzi kwezomnotho izinhlangano ezahlukene. Ukuze ngaphezulu navigation lula ngokuvumelana database demo, sebenzisa Umhlahlandlela database demo.
Kodwa naphezu kwazo zonke Izinsiza, uhlelo "1c: Accounting" kufanele zigcinwe ngaso 1c abalingani olusemthethweni. 1c yesondlo kunomkhawulo Ukuvuselela okuqhubekayo yemininingo egciniwe nobuchwepheshe platform. Isibuyekezo iqukethe wonke izinguquko temtsetfo kanye nokulungiswa kwamaphutha phakathi ukuthuthukiswa.
1c inkonzo osuschestvyaletsya ngezindlela ezimbili:
1. Thenga drive BAYO kusukela franchisees 1c.
2. Ngokusebenzisa isevisi inthanethi ye idrayivu BAYO-ROM.
Ngo ukhetho lokuqala lapho uyofika onguchwepheshe, futhi ubuyekeze isizinda sakho. Le ndlela is the ningi NEMPUMELELO futhi eqotho. Kusukela iphutha ngemva ukuthuthukiswa kungenzeka ukuqeda ngokushesha. Eyesibili indlela efanelekayo kulabo ozifakile version eziyisisekelo 1c: Izimali 8.
Kuze kube manje, franchisees 1c sihlinzeke izinhlelo usizo ezikude izilungiselelo yikuphi ukucushwa, le ndlela ushibhile amabhizinisi, njengoba akudingi onguchwepheshe ukuze phuma ikhasimende. Le ndlela inikeza okwesikhathi nomlawuli wesistimu ikhasimende. Naphezu kweqiniso lokuthi kule ndlela kudinga iyunithi uhlelo njalo umlawuli, izinkampani ukukhonza 1c ungathumela i-imeyili ku-ikhasimende elektronnnuyu isixazululo ngomumo isofthiwe enikeza elawulwa kude computer lapho ufuna ukuvuselela 1c.
Software izixazululo namuhla abaningi, ezisukela ezincane - njengoba kufayela elilodwa, ukuze izixazululo eziyinkimbinkimbi ukuthi efakwe kwi computer. Lezi zixazululo ke ungakwazi kalula ukusebenzisa esingenamkhawulo ukuthi izikhathi, ngoba software efana imahhala. Esikhathini esizayo, ukuze Inkampani exhunywe kwi-computer ikhasimende, kufanele ube kuphela ukunikeza ulwazi 1c uMklami ye-ID kanye nephasiwedi. Uma inkampani yakho has a umlawuli wohlelo onendlu ikhompyutha "wena", kwanele abe franchisee 1c oda akwazi ukugcina amasevisi yelwati, akwazi ukugcina okunjalo kungenziwa yayala isikhathi sihluke izinyanga 3 kuya ngonyaka. Yeka indlela ukukhetha ukukhonza 1s inkampani yakho, unquma!
Indlela ukususa Denwer ikhompyutha
Indlela yokwenza banner "Yutuba" imizuzu embalwa
Indlela yokusebenzisa frapsom imidlalo irekhodi
Fitizela izithombe ngaphandle kokulahleka izinga
Buyekeza yokusesha base "Yandex": okusebenza ngayo
Indlela yokukhokha intela ngokusebenzisa Savings Bank of the esibulalayo: imfundo enemininingwane. Indlela yokukhokha motor intela imoto Savings Bank of the esibulalayo?
Wilanów Palace (Warsaw): izakhiwo, umlando, Museum futhi ukwaziswa okuwusizo izivakashi
Iyini inhlangano: logic of the okungenangqondo
Kuyini ngomlomo isiphawulo incazelo nelupelomagama
Aktinia Ihhotela 3 * (Bulgaria, Sunny Beach): incazelo, ukuzilibazisa, ukubuyekezwa
Uyini elisophahleni - yokonga ophoqelelwe noma isixazululo ezinhle?
Yini esithintwayo? Kuyinto zamanje nezesikhathi esizayo kwelinye ibhodlela!
Imithi elwa namagciwane ngoba izinja: lokho kungaba?
Amazing ikiwi - izithelo, unothile ngamavithamini
I projectile subcaliber lihlukile ezivamile udibi ukubhoboza